Iindaba-Izizathu kunye nezisombululo zoVuzo lwangaphakathi loMlawuli woXinzelelo
Umlawuli woxinzelelo sisixhobo esilawulayo esinciphisa uxinzelelo oluphezulu lwegesi ukuya kwigesi ephantsi koxinzelelo kwaye igcina uxinzelelo kunye nokuhamba kwemveliso yegesi izinzile. Iyimveliso enokusetyenziswa kwaye iyimfuneko kwaye iyinto eqhelekileyo kwinkqubo yombhobho wegesi. Ngenxa yeengxaki zomgangatho wemveliso kunye nokusebenzisa rhoqo Unobangela wokunxiba kuya kubangela ukuvuza kumzimba wevalve. Apha ngezantsi, umenzi we-AFK yokunciphisa uxinzelelo kwi-Wofly Technology uza kuchaza izizathu kunye nezisombululo zokuvuza ngaphakathi komlawuli woxinzelelo.
Izizathu zokuvuza kwangaphakathi kwesivalo: ivelufa ivulwa ngumoya, isiqu sevalve side kakhulu kwaye isiqu sevalve sifutshane kakhulu, kwaye umgama waphezulu (okanye wehla) womgama wevalve awonelanga, okukhokelela kwisikhewu phakathi kwesiseko sevalve kunye nesihlalo sevalve, ezingakwaziyo ukunxibelelana ngokupheleleyo, zikhokelela ekuvaleni kweLax kunye nokuvuza kwangaphakathi.
1. Isiqu sevalvevu sevaluva esilawulayo kufuneka sifinyezwe (okanye sandiswe) ukuze ubude besikhondo kufaneleke ukuze singavuzi ngaphakathi.
2. Izizathu zokupakisha ukuvuza:
(1) Ukupakisha kunxibelelana ngokusondeleyo nesitshixo sevalve emva kokulayishwa kwibhokisi yokugcwalisa, kodwa olu qhakamshelwano alufani kakhulu, amanye amalungu akhululekile, amanye amalungu aqinile, kwaye amanye amalungu akalunganga.
(2) Kukho ukuhamba okuhambelana phakathi kwesiqu sevalve kunye nokupakisha. Ngefuthe lobushushu obuphezulu, uxinzelelo oluphezulu kunye nokuqina okuphakathi okuphakathi, ukupakisha kuya kuvuza.
(3) Ukupakisha uxinzelelo lokudibana ngokuthe ngcembe kunciphisa, ukupakisha ngokwayo kunye nezinye izizathu, indawo iya kuvuza umsantsa.
(a) Ukulungiselela ukupakisha ukupakisha, yinyusa umphezulu webhokisi yokufaka, kwaye ubeke umsesane wokhuselo lwesinyithi onganyangekiyo ngesikhewu esincinci emazantsi ebhokisi yokugcwalisa ukunqanda ukupakisha ekubeni kuhlanjwe phakathi.
(b) Umphezulu woqhagamshelwano webhokisi yokufaka kunye nokupakisha kufuneka kugudile ukunciphisa ukupakisha.
(c) Igrafayithi eguqukayo ikhethwe njengesixhobo sokugcwalisa, esineempawu zokuqina komoya, ukungqubana okuncinci, ukujika okuncinci, kwaye akukho tshintsho kubambano emva kokuqiniswa kwakhona.
3. Isiseko sevalve kunye nesihlalo esiphambili sevalve esilawulayo sikhubazekile kwaye sivuziwe. Esona sizathu sokuvuza kwesiseko sevalve kunye nesihlalo sevalve kukuba ukulahla okanye ukuphosa iziphene kwinkqubo yemveliso yolawulo lwevalve kungakhokelela ekwandeni komhlwa. Ukuhamba kweendaba ezonakalisayo kunye nokukhukuliseka kwendawo enamanzi kuya kubangela ukhukuliseko kunye nokukhukuliseka kwesiseko sevalve kunye nezinto zokuhlala kwivelufa. Impembelelo ibangela ukuba isiseko sevalve kunye nesihlalo sevalve sikhubazeke (okanye sinxibe) kungqinelani, kushiye izikhewu kunye nokuvuza. Isixazululo: Khetha izinto ezinganyangekiyo ngokubola kumngxunya wevalve kunye nesihlalo sevalve. Ukuba i-abrasion kunye ne-deformation azikho nzulu, i-sandpaper efanelekileyo ingasetyenziselwa ukugaya ukuphelisa umkhondo kunye nokuphucula ukuguda. Ukuba i-deformation inzima, buyisela kuphela isiseko sevalve kunye nesihlalo sevalve.